Ezokuzijabulisa - Clickfor.net | Ibhulogi Yezihambeli | Thumela ibhulogi yesivakashi
Kuthiwani Uma Ungasoze Ulahlekelwe Kumdlalo Wekhilikithi we-Online Fantasy?
Ukungahlulwa emdlalweni wekhilikithi oyiphupho kuyiphupho labantu abaningi. Uma uthi nhlá, kungase kubonakale kukude futhi kunzima, kodwa okudingayo kulo mdlalo amakhono akho nolwazi hhayi okunye. Kodwa-ke, emdlalweni wekhilikithi engelona iqiniso, akuwona kuphela ikhono elibalulekile, kodwa futhi nolwazi, futhi nolwazi luza... Funda kabanzi
5 Okuqanjwe Okuphezulu Okungashintsha I-Rummy eku-inthanethi
Umdlalo wamakhadi wendabuko, i-Rummy igxile kakhulu emasikweni ethu. Sekungamakhulu eminyaka amaNdiya edlala uhlobo oludumile lwalo mdlalo, owaziwa ngokuthi i-Indian Rummy. Ngokuhamba kweminyaka, igeyimu ishintshile isuka kumdlalo wamakhadi wendabuko yaya enguqulweni yedijithali ethokozisayo eyaziwa ngokuthi i-rummy eku-inthanethi. Uma kuqhathaniswa nomdlalo womhlaba wangempela, i... Funda kabanzi
Amakhasino aku-inthanethi Vs I-Poker eku-inthanethi ingabe ukhona umehluko?
Namuhla, i-poker inokubukeka okusha futhi leyo i-inthanethi noma i-poker eku-inthanethi. Ingabe ukhona umehluko phakathi kwamakhasino aku-inthanethi ne-poker eku-inthanethi? Lokhu kuyaphikiswana. Abadlali abaningi bacabanga ngamakhasino aku-inthanethi kanye ne-poker eku-inthanethi njengomhlaba obonakalayo futhi baqhathanise nemidlalo yevidiyo. Isikhathi eside phakathi, kwakukhona ... Funda kabanzi
Izizathu Ezi-4 Zokuqasha Iphathi Ye-Bash Yosuku Lokuzalwa Yengane Yakho
Abantu abadala bangase bangajabuli kakhulu ngokushintsha unyaka ubudala kodwa ezinganeni, izinsuku zokuzalwa ziyinto enkulu kakhulu. Bahlale bebheke phambili ekuwugubheni nabangani babo namalungu omndeni. Yingakho kungakhathaliseki ukuthi usuku lokuzalwa lwengane yokuqala noma lweshumi nambili, wonke umzali uzama ngakho konke okusemandleni akhe ukulenza libe elikhethekile... Funda kabanzi
Laba Ngabahlabeleli Abaphezulu Abancane Baka-2018
Njengesinye sesitayela somculo esihluke kakhulu, umculo wesiPunjabi uwukugxilisa kwezinhlobo ezifana nefolk neSufi classical to Pop, Rap and Hip-hop music. Ikwazile ukubambelela kulokho okushiwo isiPunjabi ngenkathi izama izinambitheka zomculo wasentshonalanga njenge-Hip-hop, i-R&B ne-Rap. Ngokukhula kokuthandwa kwe... Funda kabanzi
Ukubuyekezwa kwe-movie ye-Romantic Dhadak okuzayo: u-Ishaan Khatter no-Jhanvi Kapoor
I-Dhadak ithathelwe kwifilimu yesiMarathi ethi 'Sairat'. Sekuphele izinyanga ezine kuphela kwashona umakadebona womlingisi uSridevi, kodwa ukukhishwa kwe-trailer kaDhadak kukhanyisele abantu abaningi. Le movie ihlanganisa u-Janhvi Kapoor, indodakazi ka-Sridevi ongasekho kanye no-Ishaan Khatter, umfowabo ka-Shahid njengabalingiswa abakhulu. Janhvi Kapoor... Funda kabanzi
Abalingisi nabalingisi be-Bollywood abaphezulu abangaba abasha
Iminyaka embalwa edlule ye-Bollywood ibimayelana namakhonsathi athembisayo, kungaba abadlali, abenzi bamafilimu noma abaculi. Ngenkathi abadala bemboni besathuthuka, sekuvele ubuso obuningi obusha futhi benza uphawu lwabo. I-Bollywood, eminyakeni edlule, ilethe phambi kwethu ulwandle lwabalingisi nabalingisi abanekhono... Funda kabanzi
Iqoqo Elimnandi Lezingoma Zomculo
Inqwaba yezinsimbi zomculo kanye nobuchwepheshe babaculi abafana no-Soham Munim, CA Ravi, Rahul Ravi kanye no-Jason Zachariah kuzoshiya noma yimuphi umphefumulo umangala ukuba khona kwabo embonini yomculo. Ukuma ngobude ohlotsheni lwemiculo nokuxutshwa kwalaba baculi bolahleko abashiyi nelilodwa inothi lingathinteki noma itshe elilodwa... Funda kabanzi
Indlela Amaringithoni Ahlukene Achaza Ngayo Abasebenzisi Beselula
Iselula iyona nto esetshenziswa kakhulu kule nkathi. Wonke umuntu uwusebenzisela umsebenzi wakhe. Abanye abantu bayisebenzisela ukuzijabulisa kanti abanye abantu bayisebenzisela inhloso yebhizinisi. Akukaze kube khona ukuphila ngaphandle kwayo ngoba iba yisidingo sale nkathi. Amaringithoni manje aphenduka imboni enkulu ngenxa... Funda kabanzi
Ungawadawuniloda Kanjani Amafilimu Akamuva Mahhala
Kunamawebhusayithi amaningi okulanda amamuvi afana ne-torrent avinjelwe yi-DMCA emazweni amaningi. Kodwa noma kunjalo akhona amanye amasayithi ahlinzeka nge-Bollywood yakamuva, i-Hollywood kanye nama-movie we-Punjabi mahhala njenge-HDMoviesPoint. Uma ufuna ukulanda amamuvi akamuva mahhala i-HD Movies Point ikulungele. Le sayithi ihlinzeka... Funda kabanzi
Amasayithi Angcono Kakhulu Wokulanda Amamuvi, Landa ama-movie wakamuva, Landa ama-movie wakamuva mahhala, Landa ama-movie nge-HD egcwele, Ungawadawuniloda Kanjani Amafilimu Akamuva Mahhala
1 2 IZITHUBA EZINDALA